News 18 Nepal || कति बन्यो फास्ट ट्रयाक ? यस्तो छ सेनाको प्रगति विवरण
कति बन्यो फास्ट ट्रयाक ? यस्तो छ सेनाको प्रगति विवरण
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को काम तोकिएको समयमा पूरा गर्ने लक्ष्यसाथ अघि बढाइएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै कोभिड-१९ समस्याका बाबजुद कामलाई तदरुकताका साथ अघि बढाइएको जनाएको छ ।
निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म आयोजनाको १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनाको काम छैटौँ चरणमा चलिरहेको पनि जनाइएको छ । हालसम्म समष्टिगत प्रगति १६ दशमलव २१ प्रतिशत रहेको सेनाले जनाएको छ । वार्षिक भौतिक प्रगति ४२ दशमलव ८५ र वित्तीय प्रगति ५२ दशमलव ८० रहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
विवरण अनुसार सुरुङ निर्माण सम्बन्धी कार्यको परामर्शदाता छनौट भई काम सुरु भइसकेको छ । यस्तै पुल निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको सेनाले जनाएको छ । आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माणको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको सेनाले जनाएको छ । आयोजनाको मुआब्जा वितरण कार्य ८४ प्रतिशत सम्पन्न भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
खोकना क्षेत्रको रेखाङ्कनमा परेका स्थानमा स्थानीय विवादको कारण जग्गा प्राप्तिमा बाधा परेको सेनाले जनाएको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यक समन्वय तथा पहल भइरहेको पनि जनाइएको छ । आयोजनाका लागि चालु वर्षमा पुँजीगत र चालुतर्फ गरी आठ अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । द्रुतमार्गको समष्टिगत कार्ययोजना अनुसार आयोजनाको कार्यक्षेत्रलाई ११ कलस्टरमा विभाजन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर कोभिडका कारण आयोजना समयमा सकिनेमा चुनौती थपिएको सेनाले जनाएको छ । लक्ष्य अनुसारको काम समेत प्रभावित भएको विवरणमा उल्लेख छ । आयोजनाको कुल लम्बाई ७२ दशमलव ५ किलोमिटर रहेको छ । जसमा तीन स्थानमा सुरुङ मार्ग समेत रहेको छ । यस्तै विभिन्न पुलहरुको लम्बाई १० दशमलव ५९ किलोमिटर रहेको छ ।
नेपालमा थप ३०२ जनामा कोरोना पुष्टि, ७ जनाले गुमाए ज्यान
आज प्रचण्ड-नेपाल समूहको शक्ति प्रदर्शन, प्रहरीको यस्तो निर्देशन
जो बाइडेनको नयाँ नीतिले नेपाल र नेपालीमा पार्न सक्छ यस्ता प्रभाव
नेपालमा थप ३३६ जनामा कोरोना पुष्टि, ४ जनाले गुमाए ज्यान
बस दुर्घटना हुँदा दुई जनाको गयो ज्यान, १७ घाइते
न्युज २४ बाट बाहिरिए रवि लामिछाने, लेखे यस्तो स्टार्टस
नेपालमा थप ३१८ जनामा कोरोना पुष्टि, ६ जनाले गुमाए ज्यान
ट्रिपरको ठक्करबाट १८ वर्षीया युवतीको गयो ज्यान